Imefusị landfill katapila TYS165-3HW - China Xuanhua Construction Machinery
TYS165-3HW katapila bụ 165 horsepower track-ụdị dozer na haịdrọlik kpọmkwem mbanye, ọkara isiike kwụsịtụrụ na haịdrọlik enyere arụ ọrụ, pilot haịdrọlik agụba akara na otu larịị n'iru na braking akara. TYS165-3HW katapila e ji elu oru oma, na-emeghe anya, kachasị Ọdịdị, mfe ime ihe na ọrụ na ala na-eri na a pụrụ ịdabere dum àgwà. Ọ bụ upgrade ngwaahịa maka n'efu njikwa ọrụ. Nkọwa Dozer T ...
TYS165-3HW katapila bụ 165 horsepower track-ụdị dozer na haịdrọlik kpọmkwem mbanye, ọkara isiike kwụsịtụrụ na haịdrọlik enyere arụ ọrụ, pilot haịdrọlik agụba akara na otu larịị n'iru na braking akara.
TYS165-3HW katapila e ji elu oru oma, na-emeghe anya, kachasị Ọdịdị, mfe ime ihe na ọrụ na ala na-eri na a pụrụ ịdabere dum àgwà.
Ọ bụ upgrade ngwaahịa maka n'efu njikwa ọrụ.
(bụghị tinyere Ripper) Operation ibu ( n'arọ) 192200
Ground nsogbu (K Pa ) 41.1
Track nlele (mm) 2300
Min. ala nwechapụ (mm) 373
Ụra iburu gị ike ( m ³) 4.6
Agụba obosara (mm) 4222
Max. egwu ala omimi (mm) 400
N'ozuzu akụkụ ( mm ) 5528× 4222× 3 190
Gosiri mgbanwe (rpm) 1850
Flywheel ike ( K W / HP ) 121/165
Gosiri mmanụ ụgbọala oriri (g / KW • h) ≤ 218
N umber nke track rollers ( ọ bụla n'akụkụ) 6
P oko (mm) 203
W idth nke akpụkpọ ụkwụ (mm) 800
Azụ (Km / h) 0-4. 33 0- 8.90 0- 14.96
Max. usoro mgbali (MPa) 12
System mmepụta ( L / min ) 185
Previous: Imefusị landfill katapila SD7HW
Oke ohia katapila SD6G